Yaada Hattattamaa – Qabsoo Uummata Oromoo – Damee Boruu irraa | QEERROO
Yaada Hattattamaa – Qabsoo Uummata Oromoo – Damee Boruu irraa
Yaada Hattattamaa – Qabsoo Uummata Oromoo
Yaroon keessa jirru kana sochiin qabsoo bilisummaa Saba Oromoo guddatee sadarkaa ol aanaa gahuu irraa kan ka’e namni Oromoo tahe hunduu karaa tokkoon tahe karaa biraa akka keessaa qooda fudhatu tahee jira. Namoota muraasa dhuunfaa mataa isaanii hordofan irraa kan hafe irraa guddaan Oromoo hiree isaa akka sabaatti ofiin murteefachuu filata. Warri fedhii dhuunfaa isaanii hordofan waan barbaadan haa argatan malee qabsoo bilisummaaf Oromoo yoo gufate dhimmi irraa hin qaban. Dhhigni uummata Oromoo akka lolaa gannaa dhangalaa jirus isaan hin mararuu. Yaroo Wayaaneen obboleessa isaanii ajjeesse darbu isaanii immoo borsaa isaa keessaa waan qabu fudhatanii reefa isaa bineesa dagalaaf dhiisanii deemu.
Sabni Oromoo ilaamaan yartuu akkasii horee qabaa jennee wal hiin gaafannu. Bareechee qaba. Kana barba baraan agarree jirra. Yaroo har’a kana kan wal gaafachuu fi irratti mariiachuu qabamuu: Gaaffii tokko tokkoon keenya maal yoo goone lubbuun diina gabaabachuu danda’a? isa jedhu taha. Nama Oromoo tahaee dhalatee duwwaa utuu hin taane, uummata Impayeera Itoopiyaa keessa jiruuf maraaf diinni duraa TPLF akka tahe gadi fageessinee hubachuu qabna. Keessattuu uummta Oromoof gaaffii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ti. Mootummaan TPLF kun ilmaan Oomoo waloon aradaa Oromiyaa irra dugugee balleessuuf ifatti xiyyeefatee jira. Kan Agazii xiqaatee waraana Somalee Liyuu Polis jedhu leenjisee, hidhachiisee uummata keenya irratti bobaasaa jira. Gochi kun haala lama of keessaa qaba. Inni duraa duraa ilmaan Oromoo fi qabeenya Oromoo barbadeessuu dha. Inni lammaffaa yoo milka’eef Uummata Oromoo fi Uummata Somalee walitti diruuf.
Qabsoon bilisummaa Saba Oromoo gargaarsa uummata bal’aa (critical mass support) waan qabuuf of booda deebi’a jennee yaadahuu irra dabrree jirra. Namoonni muxxannoo qabsoo fi dammaqinsa gahaa siyaasaa hin qabne didaa xixxiqqoo namoota oromoo jiddutti ka’uu fi arabsoo namni walaalaa fi gowwaan ‘social media’ irratti ofaa jiranii gaddanii abdii kutatan. Ummata Oromoo jidduu garaagarummaan tokko illee hin jiru. Namootni dantaa dhunfaa waan qabanii yoom iyyuu namoota jidduu garaagrumaan namuma ni jira. Kan namoota jidduu jirua gara sabaatti harkisuun gowwumaa dha.
Seenaa uummata Oromoo keessatti haalli fokkisaa fi badaan yaaddoo namatti naqu kufaatii uummata Oromoofis tahe erga kufee asiis akka kiyyoo diinaa jalaa hin baanee namoota jajjaboo Oromootu diina wajjin hiriroo galuu dha. Seenaan ammaan kana qondalotni OPDO Mootumaa TPLF wajjin dhaabbatanii uummata Oromoo irratti hammenya hiriyaa hin qabne dalagaa jiran raga ijaan agarru dha. Utuu waan har’a qaamni OPDO uummata Oromoo fi qabeenya uummata Oromoo irratti raawwataa jiru seenaa irraa kan dhageenyu tahe dhugeefachuuf nu rakkisa. Waanuma Oromoo tahaniif qofa namoota qulquluu badii tokko hin qabne akka bineesaa damsanii ajjeessun ,tumuun , mana hidhaa keessatti rasaasaa fi hibdaan gubbuun , naafisuun , haadhoo fi haadha isaanii yaroo diinni humnaan gudeddu ilaalaa warra diinaaf hojjetan Oromoo dha jennee waamuun qaanii dha. Warri kun gataata. Waan afaan Oromoo dubbataniif malee Oromummaa of keessa hin qaban. Warra kana qabsoon bilisumm uummata Oromoo diina wajjin isaan haxxaa’ee balleessuuf booda hin jedhu.
Qabsoo bilisummaa keessatti yaadni adda addaa jiraachuu fi ijaarsi adda adda jiraachuun waan haaraa miti. Yoo dhugaa dubbachuuf tahe haalli qabsoo Oromoo keessa jiru baayyee haala nagaa dha. Humni qabsoo bilsummaa irratti boba’e yoo waliin tarkaanfachuu dadhabe wal rukkutee , dhiiga wal lolaasee wal injifatee inni humna qabu qabsoo bilisummaa itti fufa. Qabsoo uummata Oromoo raga bifa kana qabu yaroo argine hin jiru. Dhugaan ijaarsa ABO keessa namooni yaroo adda addaa sababa garaagaraaf bahanii jiru. Namni tokko akkuma fedhiin isaan seenee yoo isaa hin taane fedhiin isaan dhaaba keessaa bahuuf mirga qaba. Garuu maqaa ijaarsaa fudheen baha jechuun faayidaa maalii qabaaf? Ijaarsi akeekaa fi kaayyoo irratti ijaarameef irratti hundaa’ee maqaa abbaatu of baafate. Yoo maqaadhuma ijaarsa uummatni ammatee jiruu falmachuun barbaachisaa tahee argame illee hojiin malee ololaa fi nama abaaruun tahuu hin qabu. Ijaarsonni maqaa uummata Oromoo dhawwatan dhakkaa tokko illee haa taatu diina uummata Oromoo isa duraa kan tahae Mootumaa TPLF irratti darbachuu malee Ijarsotaa fi ilmaan Oromoo abaaruu fi arabsuun hattattamaan dhaabbachuu qaba. Yoo kana hin taane warri badii kana oofan humna TPLF jiraachisuu socho’aa jiran keessa tokko waan tahanii qabsoon uummata Oromoo isaan akeekachuu qaba.
Ijaarsi uummataaf dhaabbate akeekaa fi kaayyo dhaabbateef ibsachuu, ijaarsa isa faarsuu fi miseensa haaraa ammachuu hawwachaa ofii gudiisaa fi qaramaa deemuu dha. Karaa biraa ijaarsa ormaa abbaruu fi waan ijaarsi biraa hojjechuu dhabe odeessaa ooluun qabsawwaa nama hin godhu. Haalli kun namas hin ijaaru, barumsiis irraa hin argamu, ofumaa dhamuu dha. Ofiis dhamaanee uummata keenyaa kiyyoo garbummaa jala tursiisuu irraa Waaqayyoo nuu haa olchu. Yoo waan ijaarsi Oromoo tokko hojjetu nuuf hin taane, Oromota yaada keenya qaban barbaannee ijaaramuu qabna. Ijaaramuuf immoo eenyuma irraa iyyuu eehama fudhachuu hin qabnu. Ijaaramuu hin danddenyu immoo yoo tahe warra xiqqoo yaada keenya fakkaatu wajjin dhaabbannee qaqajjelchaa akka yaada keenya fudhatan gochaa qabsoo uummata keenya keessa qooda fudhachuun barbaachisaa dha..
Utuu dhaaba keessa hin jiraatiin miseensi dhaaba tokkoo bu’uu qaba jedhanii iyyaa oluun seera siyaasaa fi ijaarsa kan hin beekne yaada tikstu ti. Dhaaba tokko jijjiruun yoo barbaachisaa tahee keessa seenanii isa dabe qajeelchuu nama hin hojjenne ilaa fi ilaameen irraa buusanii nama dandeetiif muxxannoo qabu bakka buufachuun waan hin danda’amneef hi jiru.
Akka hawwii koof qoofa utuu hin akka haalli yaroo barbaachisaa tahee jirutti tokko tokkoon dhala Oromoo qabsoo kana keessaa qooda fudhachuu qabna. WBO fi QBO lubbuu isaanii isa qaalii tahe wareegudhaan halkanii fi guyyaa diinaan kokee wal qabaa wareegamaa jiru. Warri wareegama lubbuu kennuu irra hin jirre immoo gargaarsa qabeenyaa, meeshaa fi hamilee gocxhuun kan filmaata hin qabne. Oromiyaa bilisoomtee irratti warri bashananuuf deemnu warra lubbuun hafne malee warra wareegaman miti.
Warri WBO fi QBO irratti hammenyaa yaadanii fi hojjetan lukkee diinaa waan taahanii adda isaan baafachuu qabna. Namonni Oromoo hedduun diaspora jiran warra hin baranne, hin dammaqinnee fi hojii diinaa fi kan uummataa isanii adda baasanii hin hubanne dha. Kanaaf jecha waanuma isaanitti fakkaate ‘social media’ barreessaa fi odeessaa oolu. TPLF humna Oromoo facaasuuf baasaatota lakkobsa hin qabne nu keessa facaaftee jirti. Hojiin tokko tokko keenya warra hojii diinaa raawwachaa jiruu fi warra walaalummaaf dogongran adda baasuu qabna. Warra dogongoran abaaruu fi arabsuu dhiifnee, dammaqisuu, barssisuu fi gara qabsoo uummataatti deebsuu qabna. Warra diinaaf hojjetan haaleelan lukkee diinaa irratti godhamu irratti godhamuu qaba.
Uummata keenya duguggaa saynii jalaa olshuuf tokko tokkoon keenya itti gaafatama dhalootaa qabna. Utuu lubbun dhaabbannee jiruu yoo sayniin keenya lafa irraa bade jiraachuun qaanii dha. Akka deemsa TPLF yaroo kanatti dhumaatiin saba keenyaa fagoo hin jiru. Saba keenya dhumaatii jalaa olshuu kan dandeenyu biyya keessaa fi alaa akka nama tokkotti kaanee TPLF dura yoo dhaabbane dha. TPLF amantii, naannoo fi ganda warra kana ykn warra sana kan jettu hin qabdu. Hunda waliin lafa irraa haxxaa jirti. Yaroon kun yaroo waa’ee siyaasaa teenyee geerarru miti. Yaroo uumata keenya badii jalaa olshuuf waan qabnu qabnee dirmannu dha. TPLF biratti nagaa qabsoo gochuun akka nu baasaa hin jirre argaa jirra. Waan qabnuun of irraa ittisuu fi warri duuba jirru waan qabnu warra dura jiraniif dabrsuun haa jajabeessinu.
Manguddoonni, Abbootiin Masigdaa fi Waldaa Kristaanaa, Waaqayyoo akka uummata keenyaaf humnaa fi jabbina kennu kadhaanaa godha. Namoota Oromoo jarjartiin gama qabsoo booresuuf tattafatanii gorsaa keennaaf, kadhannaas godhaaf. UUmmatni keenya baayyee hubamaa jira. Cinqiin uummatni keenya keessa jiru kan boqqonnaa nuuf kennu miti. Hundi keenya kan seenaan nu irr eegu gochuun dirqama.